Gara Iray ao Azerbaijan Alohan’ny Ahatongavana Ao Nagorno Karabakh, Mangina Rehefa Tsy Voadaroka Baomba · Global Voices teny Malagasy
Gara Iray ao Azerbaijan Alohan'ny Ahatongavana Ao Nagorno Karabakh, Mangina Rehefa Tsy Voadaroka Baomba
Voadika ny 06 Febroary 2017 7:25 GMT
Sary nalaina tao amin'ny Chai-Khana.org, nahazoana alalana. Rafael Mammadov mipetraka ao amin'ny biraony eo anoloan'ny sarin'ny Filohan'i Azerbaijann Ilham Aliyev. Nahazoana alalana avy amin'ny Chai-Khana.org avokoa ny sary rehetra ato amin'ny lahatsoratra.
Ity lahatsoratra ity dia avy amin'ny lahatsoratra fiarahamiasa nosoratan'i Ilkin Hasanov ary nivoaka voalohany tao amin'ny tranonkala Chai-Khana.org.
Niasa nanomboka tamin'ny taona 1983 ny garan'i Kocharli ao amin'ny faritra Terter ao Azerbaijan, firenena sovietika taloha, ary gara farany indrindra alohan'ny idirana ao amin'ny faritra niadiana tao Nagorno Karabakh nifanandrinan'ny firenena tamin'i Armenia.
Talohan'ny nivakisan'ny ady teo amin'ny Armeniana sy ny Azerbaijanis amin'ny fifehezana an'i Nagorno Karabakh tamin'ny taona 1988, nitondra mpandeha sy entana avy any andrenivohi-pirenena, Baku, 250 km, hatrao amin'ny gara farany ao Karabakh, Khankendi ny lalamby.
Taorian'ny taona 1994, raha nosoniavina ny fifanekena fampitsaharana ady, nanjary lasa gara Kocharli ny gara farany tao amin'ny tambanjotran-dalamby ao Azerbaijan, ary nampiasaina ho fitondrana mpandeha ihany.
Nilaza ny mpikarakara ny gara, Rafael Mammadov, fa tsy ampiasaina matetika tahaka ny tamin'ny andro Sovietika ny fiaran-dalamby, na dia misy aza ireo mpandeha sasany mbola mampiasa azy isan'andro. Mandritra ny vanin-taona mafana, mitondra ireo mpianatry ny oniversite avy any Baku sy ny tanàna hafa mankany amin'ny tanàna niavian'izy ireo mandritra ny vakansin'ny vanin-taona mafana ny fiaran-dalamby.
Nandritra ny nahamafy indrindra ny ady, nampiasaina ho toeram-pitsaboana sy fialofana ho an'ny olona nafindra toerana ny gara. Vao haingana teo, nahita trano onenana tao anatin'ny lamasinina mpitondra entana ireo olona nafindra toerana avy ao Karabakh. Telo taona mahery tatỳ aoriana, nafindra tamin'ny toerana vaovao izy ireo, na dia najanona tao aza ny maro tamin'ny fananan'izy ireo.
Niaritra fahasimbana nandritra ilay antsoina hoe “Ady Efatra Andro” tamin'ny Aprily 2016 ity gara taloha izay akaikin'ny tsipika ifanoloran'ny firenena roa tonta ity. Nila fanavaozana ny gara na dia talohan'ny nianjeran'ny baomba tao akaikin'ny trano aza, ka namaky ny varavarankely sy nahatriatra ny tafon-trano.
Rehefa avy ny orana, mitete avy eny amin'ny valin-drihana mankao amin'ny efitrano malalaka ny ranon'orana. Satria ao akaikin'ny tsipika ifandraisana no misy ny gara, dia tsy misy ny fantson'etona. Rehefa tapaka ny herinaratra amin'ny ririnina, mety hamely mafy ny hatsiaka.
10 ora izayAzerbaijan